Ilhaan Cumar Oo Guul ka soo Hoysay Doorashada Aqalka Congresska Mareykanka. – Heemaal News Network
Ilhaan Omar ayaa noqoneysa qofkii ugu horeeyay ee Soomaali ah oo Qaxootinimo ku taga dalkaasi Mareykanka oo ka mid noqota Aqalka Congress-ka, waxaa ay guushaasi ka gaartay doorashaddii dhexe ee Mareykanka ee shalay dhacday.
Hoos u dhaca ku yimid heshiiskii u dhaxeeyay Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa salka ku haya heshiis milatari oo labada Kuuriya ay qorsheynayaan. Heshiiskan ayaa xukuumadda Washington ay ka walaacsan tahay inuu wiiqi doono awoodda […]
Maraykanka Oo Sheegay Inay Duqeyn ay ka Fuliyeen Gobolka Sh/hoose ku Dileen Sarkaal ka Tirsan Alshaab.
Ciidamada Milatariga ee Maraykanka ee AFRICOM ayaa sheegay in duqayn ay ka fuliyeen deegaanka Kuunyo Baroow ay ku dileen sarkaal ka tirsanaa dagaalamayaasha Alshabaab. Taliska ciidamada Maraykanka ee AFRICOM waxa ay sheegay inaysan dad rayid […]